सभामुखलाई थापाको प्रश्न : सर्वोच्चमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कारबाही कसरी हुन्छ? - Parichaya.com
सभामुखलाई थापाको प्रश्न : सर्वोच्चमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कारबाही कसरी हुन्छ?
By परिचय	 On २८ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार १३:२३ 0
पोखरा/ राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले सर्वोच्चमा आफुले दिएको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कारबाही कसरी हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
उनले सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई इंकित गर्दै यस्तो भनेका हुन् । शुक्रबार गण्डकी प्रदेश सभामा सभामुखले जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापालाई पदबाट मुक्त गर्ने पत्र आएकाले फेरि पद मुक्त गरिएको सूचना जानकारी गराएका थिए ।
सोही विषयमा उनले सभामुख नै दलाल बनको अरोप लगाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सभामुखले विहिबार नै प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी नै नगराई नियम उल्लंघन गर्दै आफूमाथि कारबाहीको पत्र सदनमा सुनाउनु गलत छ । यस हर्कतले उहाँ दलाल भएको पुष्टि हुन्छ ।’
पहिलो पटक प्रदेश सभाबाट निलम्बित सांसद थापालाई सर्बोच्च अदालतले पुन:वहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उनको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन छ । पहिलो पटक पनि पार्टीको ह्विप पालना नगरेको भन्दै कारवाहीमा परेका थापालाई अहिले पनि ह्विप पालना नगरेको भनेर कारवाही गरिएको छ ।
जनमोर्चाका कृष्ण थापा फेरि पदमुक्त